के सरकारसँग 'विप्लव' समूहमाथि प्रतिबन्धको विकल्प थिएन? - Everest Dainik - News from Nepal
के सरकारसँग ‘विप्लव’ समूहमाथि प्रतिबन्धको विकल्प थिएन?
काठमाडौँ, फागुन २९। केही दिन यताका राजनैतिक घटनाक्रमले देश फेरी अन्यौलको भुमरीमा फस्न गैराखेको त् होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराइदिएको छ।
दुई तिहाई बहुमतको देशको संसदीय इतिहासकै शक्तिशाली सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गर्दा पछिल्लो पटक पूर्वी तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन संचालन गरिरहेका सीके राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौतापछि विपक्षी र सत्तापक्षकै केही नेताहरूको घेराबन्दीमा परेको थियो।
मंगलबारमात्रै सरकारले आन्दोलनरत नेकपाको विप्लव समूहलाई प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको यस निर्णयलाई कतिपयले विगतमा देशले भोगेको कहालीलाग्दो अवस्थाकै पुनरावृत्तिको संकेतका रूपमा लिएका छन्।
विसं २०५२ देखि एक दशकसम्म चलेको जनयुद्धमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाएको ठानिन्छ।
“राजनीतिक मागहरूको आवरणमा यदि अराजनीतिक क्रियाकलाप हुन्छन् भने राज्यले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यस्ता खालका क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिसकेपछि यदि राजनीतिक वार्ता गर्ने हो भने सरकार त्यसको निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ,” पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले बताए।
“वार्ता समितिसँग वार्तामा पनि नआउने अनि स्थानीय तहमा गतिविधि तीव्र पार्ने खालको प्रयास भएको देखिन्छ। सरकारसँग हुने केवल दुईवटा विकल्प हो – या त वार्ता गर्नुपर्‍यो या त शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्‍यो। यसो हेर्दा उसले गरेको वार्ताको प्रयास सफल देखिएन र अब दोस्रो विकल्प रोजेको छ। तर फेरि पनि उक्त समूह वार्तामा आउने सम्भावना रहन्छ,” अर्का पूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवालको भनाइ छ।
‘खै राष्ट्रिय विमर्श?’
“विगतमा पहाड जत्रो आकारको माओवादी समस्या त तत्कालीन कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नायकत्व र प्रचण्डको भूमिकाका कारण सुरक्षित अवतरण गराउन सकिएको थियो भने आज सानो आकारमा रहेको तर त्यही माओवादी दर्शन बोकेर हिँडेको समूहलाई मिलाउन सक्ने राजनीतिक सामर्थ्य राज्यले देखाउनु पर्थ्यो,” कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने।
“यो प्रकारले प्रतिबन्धमा जाने भनेको उनीहरू उपर एक ढङ्गले संकटकालकै व्यवहार गरिनु हो। यस्तो प्रकारले जाँदै गर्दा सरकारले संसद वा विपक्षीसँग कुनै प्रकारको विमर्श गरेन। त्यसैले यो प्रयोग हो जुन सफल वा असफल जे पनि हुन सक्छ तर यो बाटोमा जानु अगाडि कम्तीमा राष्ट्रिय विमर्श हुनुपर्थ्यो।”
द्वन्द्वरत समूहप्रति सरकारी रवैयाको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले मात्र नभै सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत तीखो आलोचना गरेका छन्। बिबिसी नेपाली सेवामा प्रकाशित संजय ढकालको सामग्रीको सार।
ट्याग्स: Biplav, Biplav banned